Ny raketa dia fianakavian-javamaniry be nofo sady misy tsilo avy any Amerika nefa hita koa aty Afrika sy ao Aostralia ary any amin'ireo faritra manodidina ny Ranomasina Mediteranea. Tsy tokana ny karazan-draketa fa misy any amin'ny roa arivo any ho any ka ny ankabetsahany dia maniry amin'ny faritra manana toetany karankaina. Ny voan-draketa dia misy nofony azo atao sakafo sy ranony azo atao fisotro.
Ny ankamaroan'ny karazan-draketa dia misy tahony be tsilo (izay antsoin'ny olona hoe "avin-draketa") sy fakany. Tsy dia tena misy taova azo lazaina hoe "ravina" ny raketa, raha ny tena marina, ka matetika kely dia kely na lasa tsilo amin'ny ankapobeny ny tokony hantsoina toy izany. Mibontsina sady nofosana noho izy mitahiry rano ny tahon-draketa. Misandrahaka saika manakaiky ny ety ivelan'ny tany aniriany ny fakan-draketa na dia misy ireo faka mahatakatra lalindalina kokoa ka ahafahany mifikitra mafy amin'ny tany. Any amin'ny tany hay ny raketa dia maniry mifanelanelana lavitra.
Ny fisian'ireo faritra ivoahan'ny tsilo no tena mampiavaka ny raketa amin'ny zavamaniry hafa. Tsy misy tsilo ny raketa sasany fa karazana volovolo na zavatra mampalailay izay mitombo eo amin’ireo faritra tokony hanirian'ny tsilo no misolo ny tsilo. Matetika mahafinaritra jerena nefa tsy maharitra ny vonin'ny raketa. Maro ny lahimbonin'ny raketa. Ny voan-draketa dia matetika miloko marevaka sady be nofony. Volen'ny olona mba hanaingo tanàna ny ankamaroan’ny karazan-draketa ka ireo reketa tsy dia mitombo firy no tena tian’ny olona atao an'izany.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Raketa&oldid=985233"
Dernière modification le 3 Mey 2020, à 15:27
Voaova farany tamin'ny 3 Mey 2020 amin'ny 15:27 ity pejy ity.